Calendar Calendar | FXCC
Home / Fanabeazana & Fikarohana / Research / Calendar Calendar
Calendar Calendar Economic
Ny kalandrie ara-toekarena dia fitaovana varotra tsy azo ianteherana, izay matetika tsy takatry ny sainan'ny mpivarotra. Mialoha ny vanim-potoana; Ny fahafantarana ny fandaharam-potoan'ny famoahana ara-toekarena amin'ny alàlan'ny kalandrie, dia lafiny iray tena ilaina amin'ny fanohanana ny fahombiazan'ny varotra. Ny fahafahana miditra amin'ny kalandrihena ara-toekarena iray manontolo, amin'ny antsipiriany sy amin'ny antsipirihany, dia tena zava-dehibe ary ho an'ny mpivarotra FX dia mitombo io lanjany io.
Ahoana no manararaotra ny Kalandrieo
Mametraka daty daty ho an'ny kalandrie
Mifidiana izay mifototra amin'ny angon-drakitra
Mifidy izay firenena mifandraika amin'ny angona
Ampiasao ny kalandrianao mba hanasongadinana ireo boky sy famoahana sasany
Fanteno ny fiantraikan'ny fiantraikany; avo, midina na ambany
Ny hetsika ara-toekarena macro, ny tatitra sy ny famoahana angona, navoakan'ny governemanta, ny sampan-draharahan'ny governemanta ary ny fikambanana sasany tsy miankina; toy ny Markit miaraka amin'ny PMI manana mari-panaja sy mendrika azy ireo, dia mety hisy fiantraikany amin'ny sandan'ny vola, indrindra raha mandanjalanja manohitra ny vola hafa.
Miaraka amin'izany, ao an-tsaina dia nampiditra kalandrie ara-toekarena entina mandroso ho an'ny mpanjifa sarobidy ny FXCC. Tahaka ny amin'ireo kalandrie ara-toekarena maro dia manana ny endri-javatra sy tombontsoa tsotra azontsika antenaina amin'ny kalandrie fototra. Na dia izany aza dia efa nampiditra votoaty sy votoaty hafa izahay mba ahazoana antoka fa ny kalandrie no mampitombo ny maha-zava-dehibe ny mpanjifanay. Ny kalandrie ihany koa dia manana endri-javatra mampiseho ny fiakaran'ny sintom-barotra misy ny famoahana vaovao.
Rehefa mifidy ireo safidy samihafa amin'ny alàlan'ny bokotra dia afaka mametraka ny safidiny ireo mpanjifa FXCC.